Home - For her Myanmar
Health, Knowledge, Women News
Christina Rosy December 10, 2019
Christina Rosy December 4, 2019
Health, Knowledge, Uncategorized
Letters From the Heart, Motivation, Women News
Christina Rosy October 18, 2019
<Unicode> မင်မင်တို့ So What!? နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ရာသီသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားနဲ့ အမှန်တရား တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ So What!? ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ရာသီသွေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု campaign တစ်ခုပါ။ ယောင်းတို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ပေ့ချ် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ So What!? ရဲ့ poll မကြာသေးခင်ကတင်ထားတဲ့ poll လေးအရ ရာသီလာနေတုန်း မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေရှိတယ် ဆိုတဲ့အဖြေ 77% ရှိပြီး ဘာစားစားရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကတော့ 23% ပါ။ 🤩🤩 တကယ်တော့ ရာသီဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့ အစားအစာဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးနော်။ 🍎🍞🥜🥩🍚🍶👌အက်မင်တို့ရဲ့ အမေတွေ၊ အဖွားတွေဆီက အကြားရဆုံးစကားကတော့ ‘ဓမ္မတာလာနေတုန်း…
<Unicode> မင်မင်တို့ So What!? နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ရာသီသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားနဲ့ အမှန်တရား တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ So What!? ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ရာသီသွေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု campaign တစ်ခုပါ။ ယောင်းတို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ပေ့ချ် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ So What!? ရဲ့ poll လေးအရ ရာသီလာနေတုန်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေ 41% ရှိပြီး လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေကတော့ 59% ပါ။ 🤩🤩 တကယ်တော့ ရာသီလာနေတုန်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်ခြင်းဖြင့် နေရတာ ပိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်တဲ့။ 🏋️‍♀️🤼‍♀️🙆‍♀️ အရင်တုန်းက အခုခေတ်လို ရာသီလာရင် သုံးစရာ pad တွေ…
<Unicode> မင်မင်တို့ So What!? နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ရာသီသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားနဲ့ အမှန်တရား တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ So What!? ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ရာသီသွေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု campaign တစ်ခုပါ။ ယောင်းတို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ပေ့ချ် သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ So What!? ရဲ့ poll လေးအရ ရာသီလာနေတုန်း ခေါင်းလျှော်ရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေ 37% ရှိပြီး အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေကတော့ 63% ပါ။ 🤩🤩 တကယ်တော့ ရာသီလာနေတုန်းခေါင်းလျှော်ရင် ဘေးမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးနော်။ 🙆🙅 ဟိုးအရင်က မြစ်တွေချောင်းတွေကရေကို သောက်ရေအနေနဲ့ရော၊ အထွေထွေသုံးရေ အနေနဲ့ရော သုံးကြပါတယ်။🏊🚣‍♀️🥛 ရေချိုးရင်လည်း…
<Unicode> မင်မင်တို့ So What!? နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ရာသီသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားနဲ့ အမှန်တရား တွေကို ဖော်ပြပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ So What!? ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ရာသီသွေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု campaign တစ်ခုပါ။ ယောင်းတို့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ပေ့ချ် သွားကြည့်နိုင်တယ်နော်။ ဒီတစ်ခေါက် အကြောင်းအရာကတော့… ရာသီသွေး ဘယ်လောက်ပုံမှန် ဆင်းသင့်တာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖော်ပြသွားမှာပါ။ So What!? ရဲ့Poll လေးအရ ရာသီလာရင် သွေးအများကြီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြေ ၂၉% ရှိပြီး နည်းနည်းပဲဆင်းပါတယ်ဆိုတာကတော့ ၇၁% ပါ။ အဖြေမှန်ကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လကို သွေး ထမင်းစားဇွန်း ၆ ဇွန်းကနေ ၈…
ယောင်းတို့ရေ.. So What!? ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံးသော ရာသီသွေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မင်မင်တို့က So What!? နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း ရာသီသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအသိမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားနဲ့ အမှန်တရား တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်. အခု ပထမဆုံး အကြောင်းအရာကတော့ ရာသီလာတဲ့အချိန် လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိလား? ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် So What!? မှာ မေးထားတဲ့ Poll လေးအရ ရာသီလာစဉ်လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေများတယ်ဆိုတဲ့အဖြေက ၃၉ % ရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဖြေ ၆၁% ရှိပါတယ်။ 🧐🧐 အဖြေမှန်ကတော့ ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေအနည်းဆုံးအချိန်ပါ။ 🎉🎉 ဒါပေမဲ့…
အချစ်ပျောက်ဆုံးပြီး စင်ဂယ်ဖြစ်နေတာ ပြသနာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီး သိမ်ငယ်နေရင်တော့ ပြင်ဖို့လိုလာပြီးယောင်းရေ။